Nguwuphi Ingaba oololiwe inamendu EYurophu And The World | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Nguwuphi Ingaba oololiwe inamendu EYurophu And The World
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 27/09/2020)
Ngaba wakha ayefuna ukundwendwela eYurophu into iwayini yesivuno sonyaka othile, njenge uloliwe? ntoni umsindo ukuba zihamba njani 300 ngehora? IYurophu a womnatha enkulu koololiwe-high speed ukuba kuya kamsinya oya kuyo. iinkonzo uloliwe obaleka ngesantya esiphezulu ayeke kuphela izixeko ezikhulu. Oololiwe zinika iinqwelo obutofotofo 1 kunye neklasi-2, kanye olungileyo iinkonzo zokutya. Nantsi eyona malunga the fastest oololiwe eYurophu.
I Alfa Pendular ngohambo egudle unxweme Portugal, ukusuka Braga ukuya Faro kwaye eyeka e Porto, Coimbra, no Lisbon. In ngaphantsi kwe 6 iiyure, ungakwazi ukufikelela kwelinye icala lelo lizwe kwaye bonwabele izibonelelo kuhle ababekhwele.
Alvia Trains eYurophu
i Alvia, Ingaba i inamendu oololiwe baseSpeyin eYurophu Olwa, bahambe imigama emide ngesantya efikelela kwi 250 ngehora. Ukongezelela odibanisa izixeko eziphambili Spain, le Isitimela inikeza ezimqoka mihla. Abo ezingu uhlezi enkulu ngaphezu mhlaba waneleyo imilenze, itheyibhile usonge, kunye komsindo nevidiyo.
ICE oololiwe eYurophu ukudibanisa zonke iidolophu ezinkulu eJamani nezixeko ezininzi kumazwe angabamelwane. Le-high speed ngololiwe mihla kunye neenkonzo ngeyure inikeza okuninzi: phakathi kwezinye izinto, neenqwelo air conditioning, indawo enkulu ukuba olule imilenze, ividiyo screens neenkqubo audio. I-ICE iya kukusa naphi na eJamani kwaye yindlela entle yokuya kwamanye amazwe, njenge Ostriya , Fransi , yaye Swizalend.
Arrows oololiwe (eyayisakwaziwa njenge Eurostar Italia) wenze i uthungelwano mihla ophezulu-isantya kwaye ke Olwa yaseItali e oololiwe inamendu eYurophu. Iindawo ezinika umdla nge Arrows ukuba sibe uqhagamshelwano msinya intliziyo izixeko ezininzi Italian ezifana eRoma, Venice, Florence, milan, Verona, nelase. Kukho iindidi ezintathu oololiwe Le Frecce asiqinisekisa ukuba udibaniso fastest kunokwenzeka nje kuphela imizi ethandwa eItali kodwa kwiidolophu ezincinane ezisemaphandleni Italian.
Eurostar iphantsi ophumeleleyo elwandle oololiwe inamendu eYurophu
I Eurostar-high speed Uloliwe yeyona ndlela ilungileyo esuka eLondon ukuya eBrussels okanye eParis. Le uloliwe uza kuwe ngokusebenzisa Channel Tunnel entliziyweni London. Iindawo ezinika umdla ngaphansi gama besonwabela bonke ubunewunewu i-high speed Uloliwe lwangoku.
Ezi oololiwe-high speed kucanda phakathi Austria, i Czech Republic, Jemani , Hangari, naseSwitzerland. oololiwe Railjet kukho imeko-of-the-art imifuziselo ezinika eyajijwa ukuba amava umdla ngokunika inkonzo-high speed kunye nchavelelo lowukulu. izibonelelo encomekayo ekwinqwelo kunye neenkonzo emihle ezinye iinkalo. Ngesantya ukuya ku 230 km ngeyure nganye zifikelelwe. I Railjet ikuvumela ukuba ukuhamba lonke Austria kunye kwakhona kumazwe angabamelwane afana Germany, Swizalend, no Hungary.
TGV – Ngaba Pick lethu ukuba oololiwe inamendu EYurophu
Yokuyisebenzisa lonke France nangaphaya, TGV ibamba irekhodi isantya lomhlaba koololiwe eziqhelekileyo. on 3 UTshazimpuzi 2007, Uloliwe we-TGV POS ufikelele 357.2 mph (574.8 km / h), uyenze uloliwe sesihlanu ngokukhawuleza eYurophu. TGV trainset kuye, bengekafiki 515.3 km / h (320 mph) phantsi kweemeko ezizodwa uvavanyo kwaye akazange lungqubano iimeko zemozulu ezifana inkungu ashinyeneyo okanye ezinye.
Ukuqeqesha à Grande Vitesse uya sihambe nawe ngohambo romantic eParis, okanye naphi na eselunxwemeni gaa ukuba ukuze, ndiyacela. Thenga i itikiti TGV kunye ukubamba movie kwihlabathi-edumileyo Cannes and enjoy izidiliya amahle i Loire Valley, koko. Yongeza adventure ngaphezulu kancinci ukuya ukukhwela yakho imizi ngokundwendwela ezifana Marseille, Lyon, no Bordeaux.
Le SJ Swedish eliphezulu-isantya yenye oololiwe ngokukhawuleza eYurophu eyenzelwe ngokukodwa yaseScandinavia namageduka kunye run ngesantya efikelela kwi 200 ngehora. Ezi oololiwe wosondeza kwinqanaba eliphezulu wentuthuzelo ze uvumele wena ukhethe ukuhamba ngokukhawuleza kwiziko kwizixeko ezininzi Swedish ezifana Stockholm, Gothenburg, no Malmö. Ezi oololiwe-high speed ndiyahamba ngqo eCopenhagen (Dominikha) nge endleleni inde ibhulorho kaloliwe eYurophu, engayiwayo Oresund Bridge.
Ezintsha kunye kweediliya kwenye - oololiwe fastest eYurophu ukunikela ukuba kungenzeka. Khetha uloliwe ukusuka kuluhlu olungentla kwaye siqinisekile ukuba uya kunandipha amava ufika ukuba.
Ungakwazi ukubhukisha amatikiti oololiwe zakho phakathi koololiwe inamendu eYurophu ku Gcina-A-Train Phantse yonke indawo afuna ngasentla 3 imizuzu, e angamanani amatikiti etreyini amazinga sesikhululekile iimali ukubhukisha owakhe!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#fasttrains #highspeedtrain tips uloliwe train Travel